Iyo Logitech Combo Kubata Keyboard ikozvino inowirirana neiyo nyowani iPad Pro | IPhone nhau
Iyo Logitech Combo Kubata Keyboard ikozvino inowirirana neiyo nyowani iPad Pro
Nekusvika kweiyo nyowani iPad Pro renji pamusika, vakomana veLogitech vakapa iyo Combo Bata Keyboard yemhando mbiri idzi, kesi ine backlit keyboard uye trackpad iyo inova imwe yakanakisa imwe kuMicrosoft Keyboard iyo Apple inoita kuti iwanikwe kune vese vashandisi pamutengo uri kunze kwemabhajeti mazhinji.
La kesi inodzivirira chishandiso chose, inosanganisira sitendi yekuisa chishandiso munzira dzakasiyana uye inosangana neIpad kuburikidza nehukama hweSmart Connector, saka hatifanirwe kunetseka nekuchaja bhatiri. Iyi keyboard nyowani inotemerwa pamadhora makumi mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe emadhora ePad Pro uye $ 199 yeiyo 11-inch modhi.
Kana isu tichifunga nezveMicrosoft Keyboard yeiyo 11-inch iPad Pro (inoenderanawo nechizvarwa chechina chePad Air) ine mutengo we4 euros uye modhi yeiyo 339-inch iPad Pro inokwira kusvika 12,9 euros, sarudzo iyo Logitech inotipa inofanira kutarisirwa pasina kupokana.
Iyo Logitech Kubata Keyboard Combo inotipa 4 nzira dzekushandisa:
Kunyora modhi: Inotibvumira kuisa iyo keyboard munzvimbo yakatwasuka yekunyora maemail, zvinyorwa, zvinyorwa.
Ratidza modhi: Isu takabvarura keyboard uye tinoshandisa chete rutsigiro kuona zvemultimedia zvemukati.
Sketch modhi: Naiyo yatinogona kuisa iyo iPad pakona yakanaka kutora manotsi, dhirowa neApple Penzura ...
Kuverenga Mamiriro: Isu tinobvisa iyo keyboard, kana kuiisa kumashure kuti unyatsoverenga mabhuku, magazini, yedu blog ...
Nyaya yeiyo 11-inch iPad Pro, futi inowirirana neyekutanga neyechipiri chizvarwa mamodheru. Panguva ino chete 11-inch modhi inogona kuchengetwa. Kuchengetedza iyo modhi yeiyo 12,9-inch iPad Pro isu tichafanirwa kumirira kwenguva yakati rebei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Iyo Logitech Combo Kubata Keyboard ikozvino inowirirana neiyo nyowani iPad Pro
Iyo YeMagetsi Khibhodi yeiyo iPad Pro ikozvino yave kuwanikwa chena
AirTag iri kure nemuridzi wayo inoita ruzha kana ichifamba